Ukuhamba komsebenzi: Ezona ndlela zilungileyo zokuZenzekelayo kwiSebe lokuThengisa lanamhlanje | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 6, 2017 UErik Severinghaus
Kwiminyaka yentengiso yomxholo, imikhankaso ye-PPC kunye neeapps ezihambayo, izixhobo ezindala ezinje ngepeni kunye nephepha azinandawo kwimeko yentengiso yanamhlanje. Nangona kunjalo, amaxesha ngamaxesha, abathengisi babuyela kwizixhobo eziphelelwe lixesha kwiinkqubo zabo ezibalulekileyo, beshiya amaphulo esengozini kwimpazamo nakunxibelelwano olungelulo.
Ukuphunyezwa ukuhamba komsebenzi okuzenzekelayo yenye yeendlela ezikrelekrele kakhulu zokususa ukungasebenzi kakuhle. Ngezixhobo ezingcono ezikhoyo, abathengisi banokukhomba kwaye basebenzise imisebenzi yabo ephindaphindayo, enzima, ukunciphisa umngcipheko weempazamo kunye nokwenza umnatha wokhuseleko ukunqanda amaxwebhu ukuba angalahleki kwibhokisi engenayo. Ngokuhlengahlengisa ukuhamba komsebenzi, abathengisi babuyela iiyure kwiveki yabo yokucwangcisa nokwenza amaphulo aneenkcukacha ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Ukuzenzekelayo sisiqalo esilula sokutyhala imisebenzi eqhelekileyo, ukusuka kuvavanyo lwengcinga yoyilo ukuya ekuvunyweni kohlahlo-lwabiwo mali, kwikamva. Nangona kunjalo, akukho lutshintsho ngaphandle kwemiceli mngeni. Ezi zimbini zezona ndawo ziphambili zintlungu ehlangana nazo xa usiya phambili ngokuhambahamba komsebenzi, kunye nendlela abathengisi abanokuhamba ngayo xa ujikeleze:
Imfundo: Ukwamkela ngempumelelo Itekhnoloji yokuhambahamba komsebenzi Kuxhomekeke ekuxhaseni isebe elipheleleyo (okanye, umbutho). Itekhnoloji yotshintsho-kunye noomatshini ikakhulu- ibangele inkxalabo malunga nokhuseleko lwemisebenzi ukusukela kuguquko kumashishini. Olu xinzelelo, oluhlala lungaveli kubuchwephesha kodwa kuloyiko olulula lokungaziwa, lunokuphazamisa ukwamkelwa ngaphambi kokuba kuqale. Okukhona iinkokheli zentengiso zifundisa amaqela abo ngexabiso lokuzenzekelayo, kokukhona kuya kuba lula ukunciphisa uxinzelelo lotshintsho Ekuqaleni kwenkqubo yemfundo, i-automation kufuneka ibekwe njengesixhobo esiphelisa izinto ezingafunekiyo kwimisebenzi yabarhwebi. , hayi njengomatshini oza kuthatha indawo yomntu. Indima yokuzenzekelayo kukususa imisebenzi emincinci njengamatyathanga amade e-imeyile kwinkqubo yokuvunywa. Imiboniso ekhethekileyo yendima okanye iiseshoni zokuqeqesha yenye yeendlela zokuvumela abasebenzi bazibonele ngawabo amehlo indlela abaya kuphucula ngayo usuku lwabo lomsebenzi. Ukulinganisa ixesha kunye nomzamo wabasebenzi baya konga kwimisebenzi eqhelekileyo njengokujonga ngokutsha uyilo okanye iimvume zekhontrakthi kunika abathengisi ukuqonda okubonakalayo kwindlela itekhnoloji eya kuba nefuthe ngayo kubomi babo bemihla ngemihla.
Kodwa imfundo ayinakuphela ngentlanganiso yosuku olunesiqingatha okanye uqeqesho. Ukuvumela abasebenzisi ukuba bafunde ngesantya sabo ngokusebenzisa iiseshoni zokuqeqesha umntu ngamnye kunye nezixhobo ezikwi-Intanethi ezixhobisa abathengisi ukuba babambe inkqubo yokwamkelwa. Kwelo nqaku, abathengisi kufuneka bathathe inxaxheba kakhulu xa besenza ezi zibonelelo. Ngelixa isigqibo sokuya kwidijithali sinokuthi sivele phezulu ezantsi kwaye isebe le-IT iya kuba yiyo ephuhlisa ukuhamba komsebenzi, abathengisi baya kuthi ekugqibeleni bazi iimeko zabo zokusebenzisa kunye neemfuno zeprojekthi. Ukwenza izixhobo zokufunda ezilungiselelwe imisebenzi ethile yesebe lezentengiso endaweni ye-jargon ye-IT kunika abasebenzisi bokugqibela isizathu sokuba batyale imali ngakumbi kumzamo wokwamkelwa.
Iinkqubo ezichaziweyo: Umgaqo othi "inkunkuma ngaphakathi, inkunkuma ngaphandle" isebenza ngokupheleleyo kukuhamba komsebenzi okuzenzekelayo. Ukuzenzekelayo ngenkqubo eyaphukileyo okanye echazwe gwenxa ayizukulungisa umba osisiseko. Phambi kokuba uqukuqelo lomsebenzi lufakwe ekhompyutheni, amasebe entengiso kufuneka abe nakho ukwenza iinkqubo zawo ukuqinisekisa ukuba imisebenzi yokuqala ibangela amanyathelo afanelekileyo. Ngelixa uninzi lweenkampani zikuqonda ukuhamba kwazo ngokwemigaqo ngokubanzi, ezi nkqubo zibandakanya inani lamanyathelo abonakala ngathi mancinci athathwa ngokungakhathali kwaye ahlala elityelwe ngexesha lotshintsho lwedijithali, umzekelo, amasebe entengiso ahlala efuna ukuhlelwa kweekopi ezininzi kwisiqwengana esinye sesibambiso ngaphambili isiya kwisigaba sokuprinta. Nangona kunjalo, amanyathelo athathiweyo ekusayinweni kunye namaqela abandakanyekayo kwinkqubo yokuhlela anokuhluka kakhulu kumasebe amaninzi. Ukuba abathengisi banakho ukwenza ikhowudi kwinkqubo eyahlukileyo yokuseka ukuhamba komsebenzi yinkqubo elula.
Ukuzenzekelayo nayiphi na inkqubo yeshishini kufuna ukuqonda okunzulu ngamanyathelo, abantu, kunye nolawulo olubandakanyekayo ukunqanda ukungacaci okunokuthi kube nefuthe elibi kwisiphumo sokugqibela. Njengoko iteknoloji yokuhamba komsebenzi isenziwa, abathengisi kufuneka babaluleke kakhulu ekuhloleni ukusebenza kweenkqubo ezizenzekelayo ngokuthelekiswa noogxa babo bencwadi. Kwiimeko ezifanelekileyo, ukuhamba komsebenzi ngokuzenzekelayo ngumzamo wokuphindaphinda owanceda amasebe okuthengisa aphucule rhoqo.
Ukuseka ukuhamba komsebenzi okuzenzekelayo kunokuba sisiqalo senguqu enkulu yedijithali kwindawo yokusebenza. Amasebe ezentengiso ahlala ebanjwa ngokuhamba kancinci nokungasebenzi kakuhle okushiya ixesha elincinci lokucwangciswa kwephulo kunye nokuphunyezwa. Ukuzenzekelayo, xa kucwangciswe kakuhle kwaye kuphunyezwa ngolwazi olupheleleyo lwemiceli mngeni enokuvela, linyathelo elifanelekileyo. Nje ukuba ukuhamba komsebenzi kubekhona kwaye kusebenze ngokutyibilikayo, abathengisi bangaqala ukonwabela imveliso kunye nokusebenzisana okuza kunye nokuhamba komsebenzi okuchaziweyo.
Umyili wokuShukuma kokuSebenza kweSpmCM
Umyili wokuShukuma kokuSebenza kweSpmCM ibonelela ngamava omsebenzisi wangoku ukuseta ukuhamba komsebenzi kwizenzo ezithathwe kwifayile, kwifolda, okanye nakwiinkqubo zangaphandle ezinje ngeSalesforce. Ngokuzenzekelayo imisebenzi yolawulo, phawula ukuhamba komsebenzi okuqhubela phambili, okanye amaxwebhu ethegi kunye neengxelo. Umzekelo, unokwenza imigaqo yokuhambisa ngokuzenzekelayo uxwebhu okanye iqela lamaxwebhu ahambelana nefolda ethile. Okanye uchaze ukukhangela, iithegi zesiko ezivumelanisa neNkqubo yoLawulo lwaBathengi (CRM) kunye nokunxibelelana ngokuzenzekelayo namaxwebhu athile ukunceda ekulandeleleni nasekunikeni ingxelo.
Imigaqo eSmart ikuvumela ukuba wenze inkqubo ebonakalayo ezenzekelayo ngekhowudi encinci okanye engenakhowudi. Ukuhambisa ngokuzenzekelayo iikhontrakthi okanye amaxwebhu kubantu abangaphakathi okanye ngaphandle kweqela lakho. Ukuhamba komsebenzi okuqhubela phambili kuluncedo ngakumbi ngexesha lesivumelwano okanye ukuveliswa koxwebhu xa unokusebenzisa idatha echazwe kwangaphambili ukunciphisa impazamo yomntu, ukuzenzekelayo ukusasazwa ukuze kwamkelwe, kunye noovimba abagcina iinguqulelo ezinonxibelelwano oluncinci lomsebenzisi.
Ukukhangela ngokuchanekileyo kwenza ukuba abasebenzisi bakwazi ukulandelela ngokukhawuleza uxwebhu ngokukhangela imethadatha efana nomhla wokuqala kwesivumelwano okanye igama lomthengi. Ungachaza ukuba uwaphawula njani amaxwebhu ngokweemfuno ezithile zeshishini. Ezi thegi zinokuvumelanisa neeCRMs ukugcina amaqela okuthengisa esebenza kunye nedatha yabathengi efanayo kwaye banokuxhotyiswa ukulandela umkhondo weekhontrakthi ezinamagatya angaqhelekanga okanye athethanayo.
tags: ukuhamba komsebenzi okuzenzekelayoCRMulawulo oludibene nabathengiukuthengisa okunamandlaukuzenzekela ngokuzenzekelayoUkuhamba komsebenzi wentengisoukuthengisaUkuhamba komsebenziintwasahloboItekhnoloji yokuhambahamba komsebenziUsebenza
U-Erik uphuhlise iimveliso ezintsha kwaye wazizisa kwintengiso kangangeminyaka engama-20, ekhokelela kumakhulu ezigidi zeedola zokuphuma kunye nengeniso evelisiweyo. Phambi kwesicwangciso esiphambili kwi I-SpringCM, U-Erik wayengumsunguli kunye ne-CEO ye-SimpleRelevance, iqonga lokufunda ngomatshini elincomekayo lokwazisa ngentengiso yedijithali. Ngo-2015, i-SimpleRelevance ithengiswe kwi-Rise Interactive, apho uErik wakhokela iSicwangciso seAkhawunti kunye neeyunithi zeshishini lobuqu.
Indlela yokuHamba kwakho enokuChaphazela ngayo i-SEO yakho